Muuqaal Cusub 2019
waxaa maamula 20-02-08
Bishii Maarso, 2019, astaanteenna iyo magacayaga ayaa si guul leh loo diiwaangaliyay, ka dib waxaan maalgelinnay usd100,000 si kor loogu qaado websaydhyada caalamiga ah ee B2B. Tani waxay calaamad u noqotay bilawgeenna maaraynta sumadaynta. Bishii Luulyo 2019, waxaan bilownay dhisme websaydh ah oo noo gaar ah, waxaan dhidibnay waax howleed u gaar ah oo waxaan bixinay lacag dheeraad ah ...
Bandhigga sanadka 2018
Waxaan kaqeyb qaadanay bandhiga sanadlaha ah ee baakadaha iyo daabacaadda, duubnay oo aan baranay qalab horumarsan & fikradda tikniyoolajiyada cusub. Tani waxay aad ugu fiican tahay mustaqbalkeena.
Shirka sanadlaha ah ee 2018!
Kulan sannadeedka 2018, shirkaddayadu waxay si rasmi ah u soo jeedisay nidaamka iskaashiga. Hal saaxiib ayaa noqdey shirkaddii ugu horreysay ee shirkad la yeesho waxaana la siiyay abaalmarinno iyo abaalmarinno. Kulan sanadeedka 2018, shirkaddu waxay u caddeysay dhammaan shaqaalaha shirkadda jihada horumarka mustaqbalka ee isbarbardhiga ...
Qofka macaamilka ka ah bandhig ayaa u yimid inuu na soo booqdo
Sannadkan, macaamiisheena VIP-ga ah, ee nala shaqaysay wax ka badan shan sano, ayaa noo yimid inay na soo booqdaan, arrimaha wadahadalka hay'adda oo ugu dambeyntii la saxiixday heshiis sannadle ah. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan bilowno bilow wanaagsan oo noocan ah!
Ganacsiga dibedda ee 2017 wuxuu bilaabmayaa
Waxaan bilownay ganacsiga shisheeye. Laga soo bilaabo sanadkii 2017, waxaan bilownay ganacsiga shisheeye. Sannadkan ka hor, waxaan daboolay oo keliya suuqa gudaha, laakiin macaamiil aad u tiro badan ayaa soo booqday shirkadahayaga. Sidaa darteed, iyadoo la kordhinayo mugga ganacsigeenna, waxaan dhignay waaxda iibka, taas oo macnaheedu yahay p ...
Waxaan helnay amarro waaweyn
Sannadkii 2016, waxaan helnay amar soo saarista shirkadda ugu weyn ee ugu fiican gudaha - Huji Hua. Ugu dambayntii way na doorteen, ka dib wareegyo xul ah. Dhamaan shirkadaheena aad ayeey u faraxsanaayeen uguna faraxsanaayeen! Dhacdadani waxay calaamad u tahay oo keliya horumarka shirkadda, laakiin sidoo kale saamaynta ...
Kooxdayada wax iibisa ayaa dhaaftay boqol qof
Sannadkii 2015 wuxuu ahaa sannad gariir-dhul gariir leh. Isbeddello cusub ayaa ku dhacay dhammaan noocyada iibka ganacsiga shisheeyaha iyo qaabab cusub ayaa soo baxay. Waxaan bilownay inaan baranno tiknolojiyada oo aan tababarno kooxdeena. Sannadkan, kooxdayada wax iibisa ayaa dhaaftay boqol qof.
Booqo bandhiga si aad waxbadan uga ogaato suuqa
Sannadkii 2014-kii, ayaan u jeedinnay bandhigyada maxalliga ah iyo kuwa shisheeye waxaanan booqanay carwada baakadaha ah ee Guangzhou iyo carwadda Dubai. Waana helnay wax badan.
Tayada wax soo saarku waa nolosha shirkaddayada
Laga soo bilaabo sanadkii 2013, waxaan taxadar dheeraad ah siinay tayada badeecada oo waxaan ka tagnay amarada qaar oo aan wax codsi ah ku saabsan. Kulan sannadeedka, waxaan soo jeedinay cinwaanka "Tayada waa Nolosheenna".
Laga bilaabo shirkadeena
Sannadkii 2012, waxaa la aasaasay Qingdao Shuinging Commercial Trading Co., Ltd, taas oo calaamad u ah inaan soo saarno dhammaan alaabada magaca shirkadda markaas laga bilaabo markaa annaguna ma ahayn goob yar oo shaqo hadda ka dib.